Abadlali - Mytika Speak
Ikhaya / Izinkondlo / abadlali
Izigidi zobuso engizibonayo,
abangane bami abayisikhombisa bangigqolozele.
Ukuzifihla okuningi abakuthathayo,
ngubani olandelayo ozenza ongeyena?
Shintsha ukubukeka komzimba,
noma ukukhetha okuyisikhombisa kuphela.
Amehlo ayisikhombisa, amakhala ayisikhombisa,
Ukumamatheka okuyisikhombisa, ukuma okuyisikhombisa.
Hlanganisa uphinde ufanise ukuze ubonakale uhlukile,
iqiniso akekho ozobekezela ukukhuluma.
Izifundo ezifundiswa endaweni yothando,
ngisho namacala kamuva aqedwa.
Ngiyakubona ukuthi ungubani,
ufisa okwenziwe phezu kwenkanyezi.
Amathegiukuqonda ukukhula komuntu siqu izinkondlo izifundo ezingokomoya ingokomoya